Otu France - Benzema merụrụ ahụ, Giroud akara na France nwere mmeri - FOOT 01 - TELES RELAY
France gbara Bulgaria 3-0
Ihe mgbaru ọsọ maka France: Griezmann (29th), Giroud (83rd na 90th)
Na nzukọ ịkwadebe ikpeazụ maka Euro 2021, nke akara ngosi nke ọha na eze na Stade de France na ọnụnọ nke ndị nkiri 5000, France jiri nwayọ na-achịkwa Bulgaria site na akara 3-0.
Egwuregwu otu aka nke mgbe ụfọdụ dị ka egwuregwu All-Star, dị ka ndị Habs na-arụ ọrụ na teknụzụ, dị ka Paul Pogba sitere n'ike mmụọ nsọ. Mana n'elu akara, n'agbanyeghị ohere emere ngwa ngwa, akara bụ naanị 1-0 na ezumike. Ọ bụ Griezmann bụ onye na-emeghe counter, na a obere wepụrụ acrobatic laghachi, mgbe a ogologo oge nke French achị (1-0, 29th). Ọpụpụ nke Karim Benzema na mmerụ ahụ, n'ihi mkparị, mere ka mmụọ dị jụụ.
Mgbe ezumike ahụ gasịrị, onye na-eche nche Bulgaria Naumov ka na-agbasi mbọ ike na-arụ ọrụ, na-ekwe ka akara ahụ ghara ịba, karịsịa megide Mbappé. N'ụzọ doro anya, akara aka nke ezumike ahụ bụ Olivier Giroud, nke dị ugbu a n'ihu ihe mgbaru ọsọ ahụ na onye na-egbutu nso n'akụkụ obe site n'aka nri Pavard (2-0, 83rd). Emere ọdịiche ahụ, na karịa karịa na mmalite nke oge ịkwụsị, mgbe Lemar jere ozi Ben Yedder onye nyere Giroud okpukpu abụọ (3-0, 90th). Ezigbo arụmọrụ maka onye batara n'ọnọdụ Karim Benzema. Ndị Blues jisiri ike na-enweghị oke nsogbu n'oge ikpeazụ a maka ihe ịga nke ọma a bụ nke ga-ezu iji mee ka ndị mmeri ụwa nwee ọfụma na otu izu nke egwuregwu ahụ megide Germany na Munich.
Edemede a pụtara izizi na https://www.foot01.com/equipe-de-france/benzema-blesse-giroud-marque-et-la-france-gagne,379593
Gịnị bụ ọgwụgwọ na-agwọ ma na-agwọ hemorrhoid? - AHUIKE tinye MAG